Wasiirka Arimaha Gudaha DKMG "Alshabaab awoodoodii ayaa wiiqantaye uma bixin xeelad" – SBC
Wasiirka Arimaha Gudaha DKMG "Alshabaab awoodoodii ayaa wiiqantaye uma bixin xeelad"
Ka dib maalmo ka hor markii ay xarakada Alshabaab isaga bexeen badi magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo baxaya wararka ka soo yeeraya saraakiisha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya kaa soo ku aadan qaabka xarakada Alshabaab ay ugaga bexeen magaalada Muqdisho.
Wasiirka Arimaha gudaha iyo Amniga qaranka ee DKMG ah ayaa sheegay in xarakada Alshabaab hadalkii ay ku sheegeen in magaalada Muqdisho ay kaga bexeen arimo xeelad dagaal ah uu yahay mid aan sax aheyn ee uu sax yahay in xarakada Ay isaga bexeen magaalada ka dib markii ay wiiqantay awoodoodii dagaal.
Wasiirka Arimaha gudaha Cabdisamad Macallin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa hadalkan sheegay ka dib kulan saxaafadeed uu magaalada Muqdisho ugu qabtay saxaafada isagoona intaasi raaciyay in dowlada KMG ah ay wiiqday xarakada Alshabaab awoodeedii sidaasi awgeed ay ugaga baxday magaalada Muqdisho.
Waxa uu sidoo kale ka hadlay arimo farabadan oo ku wajahay ciidamada Dowlada KMG ah, isagoo sheegay in ciidamada Dowlada loogaga baahanyahay in ay adkeeyaan amaanka isalamarkaana goobaha ay ka bexeen xarakada Alshabaab ka sameeyaan amaan sugid, isagoona ugu baaqay in ay ka fogaadaan waxyaabaha dhibta u keeni kara shacabka soomaaliyeed.
Hadalka wasiir Cabdisamad Macallin ayaa imanaya xili magaalada Muqdisho maalmo ka hor ay isaga bexeen xarakada Alshabaab taas oo ay xarakadu ku sheegtay in ay tahay xeelad dagaal, inkastoo wararka la isla dhexmaraya ee ku aaran arinta bixitaanka Alshabaab ay aad u kala duwan yihiin.